एकपटक सबैले पढ्नैपर्ने कोरोना संग जोडिएका १० भ्रम र सत्य यस्तो छ – Annapurna Daily
एकपटक सबैले पढ्नैपर्ने कोरोना संग जोडिएका १० भ्रम र सत्य यस्तो छ
On May 15, 2021 89
काठमाडौँ । नेपालमा कोरोनाको संक्रमण दिनानुदिन तीव्र गतिमा बढीरहेको छ । यो संगै सामाजिक संजालमा अनेकौ खालका पोस्टहरु हामिले देख्न सक्छौ । ती मध्ये कति सहि हुन्छन् भने कतिपय शत प्रतिशत गलत हुन्छन् । जसले सर्बसाधारण ब्यक्तिमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । अहिले कोरोनासँग सम्बन्धित भ्रम व्याप्त छन् । जसले आम मानिसमा अन्यौल र त्रास पैदा गरिरहेको छ । आखिर कोरोनाको बारेमा सत्य के त ?
भ्रम न.१- कोरोना लाग्ने बित्तिकै मरिन्छ – धेरै मानिसमा कोरोना नाम सुन्ने बित्तिकै त्रास उत्पन्न हुन्छ । अझै धेरै मानिसमा कोरोना भन्ने घातक रोग हो, यो लाग्ने बित्तिकै मरिन्छ भन्ने भ्रम छ । यो गलत हो । विभिन्न तथ्याकं हेर्ने हो भने ८० प्रतिशत मानिसलाई कुनै पनि लक्षण नै नदेखि कोरोना संक्रमण भएको देखाईएको छ । कोरोना एउटा भाइरल इन्फेक्सन हो । तर, अन्य ब्याक्टेरिया जस्तो एन्टिबायोटिक खाएर यो निको नहुने भएपनि भाइरसको कारणले हुन सक्ने जटिलतालाई समयमै उपचार गरियो भने निको भइन्छ । त्यसैले समयमै बिरामीको उपचार गरियो भने निको हुने सम्भावना बढी हुन्छ । अहिले कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट फैलिरहेको छ त्यसैले यो परिमार्जित हुँदै जान पनि सक्छ ।
भ्रम न. २- एकपटक संक्रमित भैसकेपछि फेरि भइदैन – यस विषयमा थुप्रै अनुसन्धानहरु भइरहेका छन् । कोरोना संक्रमण भएको ५ देखि ६ महिनासम्म पुनः संक्रमित नभएको भन्ने अनुसन्धानहरुले त देखाएका छन् । तर, सबैलाई यसले सुरक्षा गर्छ नै भन्ने छैन । एक पटक लागेको व्यक्तिलाई फेरि संक्रमण भएको पनि छ तर त्यो एकदम व्यापक रुपमा भने छैन । एक पटक संक्रमण भएर फेरि संक्रमित हुने संख्या भने कमै छ । तर, लाग्दै नलाग्ने भने होइन ।
भ्रम न. ३- दिर्घरोगी र वृद्धवृद्धालाई मात्रै कोरोनाको जोखिम– हो अघिल्लो लहरमा दीर्घरोगी तथा वृद्धवृद्धाहरुलाई धेरै मात्रामा संक्रमण भएको थियो । तर यो कोरोनाको दोश्रो लहर र नयाँ भेरियन्ट हो । अहिले सबै उमेर समुहलाई संक्रमण भएको छ । दीर्घ रोगीहरुलाई मात्र होइन स्वस्थ व्यक्तिहरुलाई पनि संक्रमण भएको छ । अझै अहिलेको माहोलको कुरा गर्दा २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवायुवतिमा कोरोना संक्रमणको दर धेरै छ । त्यसैले वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीलाई मात्र कोरोना संक्रमणको जोखिम धेरै छ भन्ने सोच्नु मुर्खता हो ।
भ्रम न.४- कोरोना खोप लगाएपछि मास्क नलगाएपनि हुन्छ भन्ने सोच्नु– कोरोना विरुद्दको खोप लगाइसकेपछि फेरि कोरोना लाग्दैन भन्नू गलत हो । अझ मास्क लगाइराख्नु पर्दैन भन्नु सरासर भ्रम हो । अहिले लगाइरहेका खोप शत प्रतिशत प्रभावकारी छैनन् । त्यसैले खोप लगाउँदा यो संक्रमण हुँदै हुँदैन भन्न मिल्दैन । मैले खोप लगाएको छु मलाई केहि हुँदैन भनेर मापदन्ड नअपनाइ हिड्नु मुर्खता हो । खोप लगाएका व्यक्तिहरुमा पनि संक्रमण भएका छन् । गम्भीर अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले सतर्कता अपनाउनै पर्छ ।
भ्रम न. ५- मद्यपान खाने व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण हुँदैन- मद्यपान गर्ने व्यक्तिहरुलाई कोरोना संक्रमण हुँदैन भन्ने आममानिसको बुझाई छ । यो ठूलो भ्रम हो । मद्यपान गर्नेहरुको कलेजो कमजोर हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई संक्रमण भएमा गम्भीर अवस्थामा पुग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । भने मद्यपान गरेर संक्रमितको सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरुलाई संक्रमण हुने सम्भावना झन् बढी हुन्छ ।
भ्रम न. ६- बेसार, गुर्जो पानीको सेवनले कोरोना लाग्दैन– बेसार र गुर्जोको सेवन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक त छ तर, कोरोना संक्रमण नै हुँदैन भन्ने यसको वैज्ञानिक आधार छैन ।बेसारको सेवन त हामी दैनिक जसो गर्छौ । तैपनि हजारौँ मान्छेहरु संक्रमित भएका छन् । त्यसैले बेसार र गुर्जोको सेवन गर्दैमा कोरोना संक्रमण हुँदैन भनेर ढुक्क हुनु गलत हो ।
भ्रम न. ७- चिसोको तुलनामा गर्मी याममा कोरोना कम फैलन्छ
यो सोच पहिला- पहिला वैज्ञानिकहरूको पनि थियो । यो पनि भ्रम साबित भयो । गर्मी महिनामा पनि संक्रमण तीव्र रुपमा फैलन्छ भन्ने अहिले भारत र नेपालको अवस्था हेर्दा थाहा हुन्छ । त्यसैले गर्मीमा संक्रमण फैलदैन भन्नु गलत हो ।
भ्रम न. ८- किराहरुबाट पनि संक्रमण फैलिएको छ भन्ने भ्रम
भ्रम न. ९- नेपालमा प्रयोग भएका खोप कम प्रभावकारी छन् भन्ने भ्रम- नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएका कोरोना विरुद्धको खोपमात्रै लगाइएको छ । त्यसैले अन्य देशको भन्दा कम प्रभावकारी छन् भन्नु भ्रम हो । सबै खोप प्रभावकारी छन् । खोप लगाइयो भने संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ । तर पुर्ण रुपमा रोकथाम भने गर्दैन ।
भ्रम न.१०- १० देखि १५ सेकेन्डसम्म श्वास रोकेर कोरोना हो/होइन थाहा पाइन्छ भन्नु १० देखि १५ सेकेन्डसम्म श्वास रोकेर राख्न सक्ने व्यक्तिलाई कोरोना लागेको हुँदैन भन्नु पनि एक भ्रम हो । यसमा कुनै वैज्ञानिक प्रमाण नभएको हुदाँ यो कुरा सत्य हो भन्न सकिँदैन । मेरो लाईफस्टाईलका लागि डा. शेरबहादुर पुन, सरुवा रोग विशेषज्ञ । रासस